Indlela yokwenza imali nge-Instagram 2019 ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani imali nge-Instagram 2019
NgoJanuwari 31, 2019 0 IiCententarios 773
Uqoqosho lusisiseko se iindlela zokuphila zabemi. Umsebenzi onzima kunye nobunzima bufanelwe ngumvuzo ohambelana nawo. Yiyo loo nto ezininzi iinkampani kunye nabantu babucala bajolise ekwenzeni imali kwi-Instagram yabo. Sele ikho, ukuba le nethiwekhi ibhengeziweyo ithe yazibeka phakathi koovulindlela kwaye eyona ibalulekileyo ekukhuthazeni umvuzo wezoqoqosho ngokusebenzisa kwayo. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukuba abaninzi bafunde indlela yokwenza imali nge-Instagram 2019.
Umnxeba we-telemark uyanda kumaxesha anamhlanje. Zininzi iinkampani kunye nabantu ngubani osebenzise imithombo yeendaba zentlalo ukuphucula impumelelo yeshishini lakhe. Iinethiwekhi zonxibelelwano zenze indlela yazo kwintengiso yeshishini
Inethiwekhi yoluntu eqinisekisiweyo, i-Instagram, ifikelele kuluntu malunga ne-10 kwiminyaka eyadlulayo. Yayiyintoni intanethi yenethiwekhi abathandi bokufota, Iye yaba bubukumkani bokuthengisa. Isixhobo esikhulu esiveliswayo sisixhobo esibonakalayo sivumela oosomashishini ukuba bandise iinjongo zabo kwaye bangene ezivenkileni. Ukongeza, iqonga lizisa kunye noluhlu lwezixhobo eziya phatha intengiso kunye nentengiso.
Ngaphakathi kwezixhobo ze-Instagram eziphambili, sinokufumana Intengiso. Oku kuchazwe apha ngasentla kufuneka kuseke inqanaba lokufikelela kunye nomthengi, ngenjongo yokutsala ingqalelo yabo kwiprofayili yeshishini. Enye into eyaziwayo sisixhobo Instagram Stories Iintengiso, lnjengoko zisekwe kumabali e-Instagram njengeentengiso. Ngale ndlela abasebenzisi banokufumana imali nge-Instagram 2019.
Kutheni usenza imali nge-Instagram 2019?
Iinkampani kunye amashishini asakhasayo Banikwe umsebenzi wokwazisa ngokusetyenziswa kweendaba zosasazo njengethuba elifanelekileyo. Kwaye kukuba, xa uzisebenzisa, iinkampani ziqhubela phambili kukhuphiswano ngokuchasene nezo iintshaba zentengiso. Ngokusebenzisa iqonga ukufumana imali nge-Instagram 2019, ingeniso yeshishini iyakwandiswa ngenxa ukunyuka kwentengiso
I-interface elula ye-Instagram ibonelela ngokulula kubasebenzisi kunye namashishini abo ukusetyenziswa ngokufanelekileyo. Ke, iqonga layo elilula lilungele ukwenza imali nge-Instagram 2019. Kwaye ke, ufumane ukuthandwa kwemarike ngokwandiswa kwayo.
Ukuba umsebenzisi unqwenela ukufumana imali nge Instagram I-2019, kufuneka uzabalaze zazise Nangona kunjalo, nangona ibonakala inzima kwaye iyathandabuzeka, ukusebenza kwayo akunasiphoso. Impumelelo yeqonga lokufumana imali ayinakuthandabuzwa. Ngapha koko baninzi abasebenzisi abazinikezele kuyo. Kananjalo, zininzi imibutho enayo iphumelele impumelelo ngaye.
Uninzi lwabaxhasi be-Instagram banikezelwe ngokukodwa kuyo. Ke, uzamile ukufezekisa isihloko se-Instagramer. Ngokwenza oku, banokufumana imali nge-Instagram 2019 ngeendlela ezahlukeneyo nokwenza into abanomdla ngayo. Aba bantu banokukhetha indlela yokusebenza kunye nobani, kufanele kuphela ukuzibandakanya ekuhlaleni nabaphulaphuli bakhe
Uyenza njani imali nge-Instagram 2019?
Iindlela zokufumana imali nge-Instagram 2019, zahlukile kuxhomekeke kwi-Optics. Kwimeko yeenkampani, kuya kufuneka kube lula ukusebenzisa iqonga ukuze ufumane umvuzo. Nangona kunjalo, oku akubongozi ukuba akunakwenzeka abantu bemvelo yenze.
Ukuba umsebenzisi unoluntu lwabalandeli zininzi kwaye zizinzile, izibeke njengonakho amandla impembelelo. Ke ungasebenzisa ukunyusa imali ukwenza i-Instagram 2019. Oku, unokukwenza ukupapashwa Kwimveliso ethile. Kukho iinkampani ezininzi ezifuna iimodeli zentengiso ukwandisa ukuthengisa kwazo. Ngokusebenzisa I-Instagramers, Iya kuba yimpumelelo yamazwe amabini. Kuba inkampani iyonyusa ukuthengisa kwaye i-Influencer iyakwandisa ingeniso yayo.
Indlela enye yokwenza imali nge-Instagram 2019 kukuthengisa kweeflannels. Ukuyila yinto eyodwa, ke ukuba umsebenzisi uyilo okanye uyayithanda indawo onokuyenza thengisa uyilo lwakho kweefaneli zokuyila. Oku kungenziwa ngeendlela ezimbini. Imodareyitha yokuqala iya kuba ngumsebenzi ogqityiweyo, oko kukuthi uyilo kunye nemveliso kufuneka yenziwe ngumsebenzisi kwintengiso yalo kamva. Ngale ndlela, umntu lowo kufuneka aphathe uxanduva ukucacisa ngokupheleleyo yemveliso.
Nangona kunjalo, kukho indlela yesibini yokuba yinxalenye yentengiso yeeflatels ngeqonga. Kwaye, yenza imali nge-Instagram 2019, eyinjongo yomsebenzisi. Ngesi sixhobo umntu ngamnye kufuneka lungiselela uyilo lwakho eyokuqala ngaphambili. Ke ukuseka unxibelelwano nombutho okanye inkampani ephetheyo ukuthengisa i-t-shirt. Ukongeza, olu khetho lwabasebenzisi abanqweneli ukuba neendleko zotyalo mali lufanelekileyo, kuba abayi kuhlawula nantoni na. Kwaye kwintengiso nganye egqityiweyo, umsebenzisi ufanele afumane ipesenti yayo.
2 Kutheni usenza imali nge-Instagram 2019?
2.2 Ukusebenza kakuhle
3 Uyenza njani imali nge-Instagram 2019?
Fumanisa ukuba ungayenza kanjani intengiso yenethiwekhi yeshishini lakho
Ungayifumana njani iakhawunti ye-Instagram eqhekeziweyo